तिथि मेरो पत्रु » म विश्वास गर्न सक्दैन म किन्नु छु यो पुस्तक
म विश्वास गर्न सक्दैन म किन्नु छु यो पुस्तक
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: फरवरी. 25 2020 |6मिनेट पढ्न
दस वर्ष पहिले, कुनै एक मान्छे भेट्न सबै भन्दा राम्रो र सजिलो बाटो कम्प्युटरमार्फत हुन भनेर सोचेको थियो. खैर, अन्दाज गर्नुहोस्? यो छ. जनवरी 2002: एघार लाख मान्छे अनलाइन डेटिङ वेबसाइट भ्रमण. जुलाई 2002: अठार लाख मान्छे अनलाइन डेटिङ वेबसाइट भ्रमण. डिसेम्बर 2002: तीस-पाँच लाख भ्रमण अनलाइन डेटिङ वेबसाइट. सक्छ 2003: चालीस पाँच लाख भ्रमण अनलाइन डेटिङ वेबसाइट (comScore मिडिया Metrix, न्यूयोर्क टाइम्स, जुन 30, 2003). त्यो भन्दा बढी छ 40 अमेरिका मा सबै एकल वयस्क प्रतिशत. र धारणा बावजुद यो एक जवान व्यक्तिको मध्यम छ कि, विस्तार को मामला मा शीर्ष उमेर समूह महिला छ, तीस-पाँच चालीस चार, मानिसहरूले पछ्याए, तीस-पाँच चालीस चार. अर्को ठूलो समूह? पुरुष र महिला, चालीस पाँच पचास-चार (याहू, इंक, सेप्टेम्बर 2002).
इन्टरनेट डेटिङ पुरानो skews कि इन्टरनेट खेल भन्दा कारण स्पष्ट. एकल तीस somethings busier र थप आर्थिक सुरक्षित हुन गर्छन, जो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हो, तर प्रेमले छ, किन सेवाका लागि भुक्तानी समस्या छ जो. थप, आफ्नो लेट thirties मानिसहरू विवाह र छोराछोरीलाई गर्न दबाव महसूस गर्दै छन्. बीचमा-वृद्ध क्षेत्रको विस्तार त अचम्म को रूपमा धेरै आउनु पर्छ. बीस लाख भन्दा बढी divorcees बाहिर त्यहाँ छन्, र म आफैलाई आफ्नो बच्चाहरु संग यसलाई partying पाउन जब बार दृश्य सम्म कम मनमोहक छ भनेर अनुमान गर्न छ’ मित्र.
यो यो पाउँछ रूपमा राम्रो छ?
रूपमा हर एक ठाँउ इन्टरनेट भएको छ रूपमा, अनलाइन डेटिङ अझै पनि बैठक को थप परम्परागत तरिकामा गर्न accustomed छन् जो मानिसहरू को पुस्ताका लागि एक साहसी कदम हो. तर बैठक अन्य साधन अधिक स्थापित छन् भन्ने तथ्यलाई तिनीहरूलाई बित्तिकै उच्च बनाउन गर्दैन. यो कुरा सोच्नुहोस्. जहाँ मान्छे सामान्यतया आफ्नो जीवनसाथी पूरा गर्छन्?
बार? हाँ, तपाईं निश्चित बैठक एक राम्रो मौका “एक” के तिमीले पिएको हुनुहुन्छ भने. र सबैलाई उच्चतम गुणस्तर मान्छे बाहिर नियमित बारहरू मा झुन्डियो थाह. (यो क्यासिनो र हाम्रो महान् राष्ट्रको brothels टाढा केहि लिन छैन।)
दलहरू? मुक्त Booze र प्याज स्नान संग बाहेक बारहरू जस्तै. तर तपाईं अत्यन्तै आकर्षक हुनुहुन्छ नभएसम्म, साहसी, वा चिकना, एक पार्टी मा केही घण्टा मा कसैले उठाएर सधैं गर्न सजिलो कुरा हो. सोध्न सक्षम हुँदा, “तपाईं कसरी पाहुना थाह?” दल बार अलिकति किनारा दिन्छ.
कार्य? तथ्य: सहकर्मी संग भंग तपाईंले पहिले काम मा थियो सक्छ न्यूनतम आनन्दको कुनै पनि बर्बाद हुनेछ. म मेरो टाउको मा निर्मित एक सर्वेक्षणमा, 86 जनसंख्याको प्रतिशत बरु पूर्व रूपमा नै कार्यालय मा काम भन्दा बेरोजगार हुनेछ. त्यो सही त्यहाँ interoffice डेटिङ विरुद्ध केही पत्यार पार्र्ने प्रमाण छ.
चर्च? के तपाईं एक पल्ट मा चिल्लो हुनु आवश्यक लाग्छ? परमेश्वरको घरमा कसैको अंक प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, विशेष गरी Morn र पिताजी आफ्नो उद्देश्य भविष्यमा जोडीलाई दायाँ अर्को बसिरहेका छन् भने. आफैलाई सोध्नुहोस्: येशूले के थियो? म त्यो साथै इन्टरनेट मारा चाहन्छु अनुमान छु.
मागी बिवाह? एक बिट antiquated, सायद, तर निश्चित विकल्प को तत्व हटाउँदा एक सम्पूर्ण धेरै सजिलो डेटिङ बनाउँछ. ठूलो प्लस. गरेको एक रूपमा यो राख्न गरौं “विचार गर्नुहोस्।”
अन्धा मिति? म मेरो आफ्नै हारे बाहिर छनोट छौँ, धन्यवाद.
ठीक, त्यसैले हामी यहाँ छन्? प्रबन्ध विवाह वा इन्टरनेट? हात को एक छिटो शो अमेरिका को बहुमत अझै पनि आफ्नै त्रुटिपूर्ण डेटिङ प्रवृत्ति बढी आमाबाबुको भन्दा भरोसा प्रकट’ त्रुटिपूर्ण डेटिङ प्रवृत्ति. त्यसैले, प्रबन्ध विवाह बाहिर र इन्टरनेट डेटिङ जीत.
अचम्मको, हाम्रो यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया.
अलग सबै Jokes, डेटिंग अनलाइन माथिको विकल्प सबै भन्दा टाढा सजिलो र सस्ता छ. सजिलो र सस्तो तपाईं आफैलाई वर्णन गर्न प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ दुई शब्द हो, तर तिनीहरूले हाम्रो अनलाइन डेटिङ उद्देश्यका लागि सिद्ध हुनुहुन्छ. एउटै पचास डलर लागि तपाईं बिल्कुल कुनै एक आउँदै गर्दा एक शनिबार राति एक स्थानीय पट्टी मा पिउने झटका सक्छ, तपाईं AmericanSingles.com मा असीमित इमेल को छ महिना हुन सक्थ्यो. थप, दृष्टिकोण सजिलो छ (तपाईं एक suave पिक-अप लाइन छ छैन), यस तिरस्कार सजिलो छ (पुरानो पेय-मा-यो-अनुहार कुरा केवल कम्प्युटर माथि काम गर्दैन), र सफलता दर उच्च छ (किनभने यी साइटहरूमा सबैलाई एकल छ, आफ्नो साथीहरूसँग रमाइलो गर्न बस बाहिर भएका धेरै पल्ट संरक्षक गर्न विरोध रूपमा).
तथापि, इन्टरनेट डेटिङ को मुख्य लाभ यो छ: के तपाईं तिनलाई भेट्न अघि आफ्नो भविष्य जोडीलाई / प्रेमी / लूट कल चिन्नुको हुनुहुन्छ / उनको. यो महत्वपूर्ण छ र यो थप अन्वेषण गर्न लायकको छ.
हामी सबै एक सम्बन्धमा शारीरिक आकर्षण महत्त्व थाहा. कारण मैले आपसी यौन ब्याज को कमी गर्न तीन साथीहरू जसको गम्भीर प्रत्यक्ष-मा सम्बन्ध अलग गिर थियो गर्नुभएको. त्यसैले म इन्कार छैन छु कि intangible स्पार्क भनेर हामी सबै कल “रसायन” एक नवोदित सम्बन्ध एउटा अत्यावश्यक घटक छ. म भन्दै छु, तथापि, तपाईं कसैलाई भेट्न बाटो आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक कुराकानी मार्ग गरिदिएको गर्न सक्ने, आफ्नो भविष्य अन्तरक्रियामा, र त्यसैले, आफ्नो जीवनको बाँकी.
पाठ: “त्यहाँ, म फ्रेड छु।” Subtext: “म तपाईं नग्न हेर्नुहोस् सक्नुहुन्छ?”
म किन यो बारहरू र दलहरू मा मान्छे भेट्न त अविश्वसनीय कठिन बारेमा यो सिद्धान्त छ. यो जस्तै केहि काम गर्दछ:
यो शनिबार राति छ. केटाहरू’ रात बाहिर. बालिका’ रात बाहिर. सबैलाई एक दोहरी purpose- छ(एक) साथीहरूसँग बाहिरै र (ख) विपरीत सेक्स को कसैलाई भेट्न. तपाईं एक मान्छे हुनुहुन्छ भने, अधिकांश समय तपाईं जान घर खाली-हाथ. शायद तिमी कुनै कुरा, शायद छैन, तर शायद आफ्नो रात को सबै भन्दा सबै महिला देख्यो र कसरी अविश्वसनीय तपाईं तिनीहरूलाई को एक एक दृष्टिकोण साहस थियो भने यो हुनेछ कसरी तातो र दुर्गम बारेमा आफ्नो साथीहरू कुरा खर्च भएको थियो. तपाईं एक महिला हुनुहुन्छ भने, तपाईं शायद संसारको छ slimiest मान्छे को अग्रिम बन्द fending रात बिताए गर्नुभएको, जो तिरस्कार त प्रतिरक्षा हो कि, एक तपाईंबाट पछि, तिनीहरूले तुरुन्तै सक्छ उनि अर्को सबैभन्दा आकर्षक महिला मा हान्न पट्टी तल पाँच फिट गए. हां, यसलाई त्यहाँ एक मासु बजार छ, अझै केही मान्छे कुनै पनि गुणस्तर बैठक गरिरहेका छन्. जहाँ मेरो सिद्धान्त मा पछीको यहाँ.
परंपरागत, यो एक पल्ट वा पार्टी मा एक महिला दृष्टिकोण गर्न मानिसको कर्तव्य हो. उहाँले तरिका को एक नम्बर मा यो काम गर्न सक्नुहुन्छ. पिक अप रेखा सामान्यतया राम्रो सुरुवात हो. एक सधैं यी surefire विजेता प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ:
“मलाई थाहा दूध एक शरीर राम्रो गर्छ, तर बच्चा, तपाईं कत्तिको पिउने गरिएको छ?”
“तपाईं पहिलो नजर मा प्रेम विश्वास गर्छन्, वा म फेरि द्वारा हिँड्नुपर्छ?”
“म तपाईं को तस्वीर हुन सक्छ, त्यसैले म लागि क्रिसमस के चाहनुहुन्छ सान्ता देखाउन सक्छौं? “
“राम्रो जुत्ता. चाहन्छु सेक्स छ?”
तर तपाईंले आकर्षक र माथि लाइनहरु संकेत थियो रूपमा निष्कपट हुनुहुन्छ भने पनि, मानिसको रूपमा, तपाईं एक कठिन स्थिति बाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ. तपाईं केहि सरल र जस्तै सरल भन्न भने पनि, “त्यहाँ, म इवान छु,” बस एक महिला आउँदै द्वारा, तपाईं एउटा कुरा धेरै स्पष्ट गर्दै: तपाईं उनको प्यान्ट मा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ. त्यो यो थाह. तिमीलाई थाहा छ. कुनै कुरा तपाईं यसलाई ओछ्यान कसरी, यो तथ्यलाई सुरु गर्न उनको भन्दा तपाईं ल्याए के छ.
अब तपाईं अझ कुराहरू extrapolate गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पनि दोस्रो तपाईं एक महिला दृष्टिकोण भन्न सक्छ, त्यो धेरै राम्रो तरिकाले तपाईं आफ्ना छोराछोरीको पिता हुन जाँदैछन् कि विचार गर्न सकिएन. हाँस्न छैन. यो साचो हो. अनि त्यो एक मान्छे को लागि दबाव को धेरै छ. तपाईं एक महिला माथि त्यो तिमी संग सुत्न चाहन्छु भने पाँच सेकेन्ड भित्र उनको मन बनाउँछ भन्ने fabled factoid विश्वास विशेष गरी यदि. सत्य मा, एक मान्छे विषयमा कुनै भन्छन् छ. तर त्यो प्रयास तिनलाई रोक्न छैन. फलस्वरूप, असहज कुराकानी हजारौं अमेरिका भर प्रतिष्ठानबाट पिउने प्रत्येक दिन ठाउँ लिन, संलग्न सबै पक्षहरूका chagrin धेरै, को bartenders बाहेक, जो खुसीसाथ महंगा शीर्ष शेल्फ रक्सी मा सबैको दुःखको डुबा.
निस्सन्देह, यो मानिस / महिला / सेक्स / विवाह subtext को कुनै पनि छलफल गर्न सकिन्छ. बरु हामी हजारौं वर्ष ठाउँमा लिइएको यो अनौठो सहवास नृत्य नृत्य गर्न बाध्य छन्, वा कम से कम बार दृश्य को आगमन देखि. तपाईं कुल पराई संग छोटो कुरा बनाउन कसरी सूक्ष्म हुन सक्छ? अधिकांश मानिसहरू लागि, जवाफ छ “धैरै हैन।”
जो एक पल्ट वा पार्टी मा अप किन कसैले उठाएर एक पहिलो छाप भन्दा बढी केहि आधारित छैन. वास्तविक संसार डेटिङ किन बेकारी र अनलाइन डेटिङ नियम जो. तपाईं सुरु गर्न यो पुस्तक पढ्न हुनुहुन्छ किन जो. तर तपाईं त्यो थाह.
अन्तर भएको “प्रगति गर्नु” यो ढिलो संग, अनलाइन डेटिङ बढी व्यक्तिगत विधि र तपाईं पनि मेरो साथी टेरेसा जस्तै अन्त सक्छ (नयाँ इन्टरनेट डेटिङ रूपान्तरण), जो भर्खरै फोनमा मलाई भन्नुभयो: “विगतमा म डेटिङ थियो व्यक्ति चिन्न सम्बन्धको मा प्राप्त र त्यसपछि थियो. अब म तिनीहरूलाई डेटिङ सुरु गर्नु अघि व्यक्ति चिन्न।” Trite, तर साँचो. कसरी अक्सर तपाईं एक पल्ट मा कोही भेटेको छु, फोन नम्बर र एक चुम्बन मिल्यो, र त्यसपछि उसपछि पहिलो तारीख समयमा प्रत्येक अन्य सिकेर सुरु? कति पटक कसैले तपाईंलाई दुई संगत थिए कि पनि विचार बिना आकर्षक थियो किनभने तपाईं एक सम्बन्ध मा dived छ? अधिक ठाडै यो राख्न, हामीलाई बीचमा जो पनि आफ्नो आँखाको रंग थाह बिना कसैले संग सेक्स थियो छैन? या त्यो भाइबहिनीहरूको छ कि? वा छोराछोरीलाई उत्पादन? वा उहाँले जमानीमा बाहिर भएको कहिलेसम्म?
लज्जित छैन. यो मानव स्वभावको भनिन्छ गर्नुपर्छ. तर एक प्यारा पराई संग बोरा मा हाम फाल्न चाहनुहुन्छ यसलाई सामान्य छ बस किनभने, तर्क यस्तो व्यवहार सधैं एक दीर्घकालीन सम्बन्ध लागि सबैभन्दा ठोस जग निर्माण गर्दैन हुक्म. र हामी सबै पछि हुनुहुन्छ के, यो छैन? खैर, यो छैन?
ठीक, भनेर जवाफ छैन.